Realme 5 na-eji Snapdragon 665 na-aga site na Geekbench Androidsis
N'oge na-adịghị anya Realme ga-ebupụta usoro ọhụụ nke smartphones ọhụrụ, nke a ga-enwe site na etiti etiti na Pro dị iche. na 5 bu eziokwu Ọ ga-abụ ngwaọrụ nke etiti nke duo a, n'ezie, ọ ga-akwadebe atụmatụ na nkọwapụta teknụzụ nke etiti, yabụ ọ ga-asọmpi Redmi, Xiaomi na Oppo ngwaọrụ ike na India, agbanyeghị na ahịa ndị ọzọ.
Mgbe anyị n'echere ya, Geekbench edepụtara ụfọdụ n'ime àgwà nke a, anyị na-akọwa ha ugbu a.
Geekbench nchekwa data debara aha ihe yiri Realme 5 dị ka "realme RMX1911", enwere ike nyochaa na nseta ihuenyo nke ndepụta sitere ụnyaahụ.
Geekbench ndepụta nke Realme 5
Benchmark na-ewu ewu na-akọwapụta nke ahụ ngwaọrụ a ga - abịa na Qualcomm's Snapdragon 665, otu ihe nhazi nke Xiaomi Mi a3 nwere ma rute na nke kacha arụ ọrụ nke 2.2 GHz dị ka Snapdragon 660 na-emekwa. Chipset a na-ejigide node nke 14nm ma nwee ezigbo arụmọrụ na arụmọrụ, yabụ na ọ gaghị enwe nsogbu na-agba ọsọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwuregwu niile na ọdụ a.
A na-enyocha Realme 5 na a Nchekwa 4 GB Ram na sistemụ arụmọrụ Android. Tụkwasị na nke a, dabere na nsonaazụ ọ jisiri ike nweta, na ngalaba otu isi ya jisiri ike nweta ihe 1,525, ebe na ngalaba ọtụtụ isi, ọ gbara ihe 5,498 isi, ọnụ ọgụgụ ndị na-egosipụta ya dị ka ama dị n'etiti .
Nkọwa ndị ọzọ banyere ọnụ a ka bụ ihe nzuzo, mana a na-atụ anya na, dị ka Realme 5 Pro ga-, ọ ga-abịarukwa na a igwefoto igwefoto quad, nke ihe mmetụta 48 MP ga-eduzi. Modelsdị abụọ ahụ ga-ebido August 20 ọzọ na-esote.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Realme 5 na-eme njem nlegharị Geekbench na Snapdragon 665